Kentucky Medical Marijuana Laws - Marijuana ara-pahasalamana ao KY
Fitsipika marijuana mpitsabo any Kentucky
Miresaka momba ny boky ankehitriny
fahazoan-dàlana mitombo ny asa tanana
Kentucky Medical Marijuana ara-dalàna sy fahazoan-dàlana mety ho avy amin'ny 2021!
Sambany tao amin'ny 2020 - Kentucky dia nifidy ary nandany ny Legalization Cannabis Legalization! Ny Kentnabis Medical Cannabis Laws dia mety hiova tsy ho ela satria ny antenimieram-pireneny dia nifidy 65-30 mba hanomezana ara-dalàna ny rongony rongony ho an'ny mponin'i Kentucky. Mety ho lasa lalàna io tsy ho ela ary mamela ny marary hiditra amin'ny fanafody rongony ara-dalàna ary ho an'ny olon-kafa hisoroka ny fisamborana tsy ilaina izay tohizan'ny fiarahamonina voarara.
Kentucky Medical Marijuana Bill 2021
Tsy mbola misy ny azo antoka, saingy nankatoavin'ny trano Kentucky ny volavolan-dalàna momba ny marijuana ara-pitsaboana - izay nanova ny anarany ho rongony ankoatry ny zavatra hafa.
Mivoatra ny lalàna momba ny rongony ara-pahasalamana ao Kentucky, izay midika fa mety hiditra miaraka amin'ny fanjakana ara-dalàna ny rongony ho an'ny mararin'ny mpitsabo i Kentucky! Tsy ho ela, mety hahazo a fahazoan-dàlana hampandehanana ny orinasan-tsakafo medaly anao any Kentucky.
Kentucky dia mbola mila manala ara-dalàna ny marijuana amin'ny taona 2021
Mitady Kentucky Fampahalalana momba ny dispensary - kitiho eto.
Kentucky HB 136:Mamorona vaovao vaovao Fitsipika marijuana medikaly Kentucky to mamaritra ny teny; manala ny fandaharam-pahasalamana rongony fanafody amin'ny fandaharana efa misy ao amin'ny lalàna Kentucky mifanohitra amin'izany; mitaky ny departemanta amin'ny alikaola amin'ny fantsom-pisotro misy alikaola sy ny fifehezana ny angovo hametraka sy hanara-maso ny fandaharana mari-pana rongony ao Kentucky; hametraka ny fizarazarana ny rongony rongony ao amin'ny sampan-draharahan'ny fisotroan-toaka sy ny fifehezana ny vatan-jaza; hametraka fameperana amin'ny fananana rongony fanafody amin'ny alàlan'ny marary mahay, mpitsidika mpitsabo ary mpikarakara voatendry; hametraka fiarovana sasany ho an'ny mpiantsena; fananganana fiarovana arak'asa ho an'ny mpanao fampiharana; hanome ho an'ny fahazoan-dàlana ireo mpitsabo amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny fanjakana hamoaka ny taratasy fanamarinana an-tsoratra ho an'ny fampiasana rongony rongony; fananganana fiarovana arak'asa ho an'ny mpisolovava; mandrara ny fahazoana sy ny fampiasana rongony fanafody amin'ny aotobisy sekoly, eo am-pianarana any an-tsekoly na sekoly ambaratonga voalohany na faharoa, amin'ny trano fanitsiana, ny lalàna ara-pitsaboana Kentucky Medical Cannabis, ny fananan'ny governemanta federaly, na eo am-piasana fiara mandeha môtô; mandrara ny fifohana sigara amin'ny rongony rongony; hanome alalana mpiasa iray hametra ny fananana sy hampiasa rongony rongony omen'ny mpiasa;
Lalàm-pahasalamana momba ny marijuana any Kentucky
Ny lalàna marijuana ara-pitsaboana vaovao an'i Kentucky dia hitaky ny sampan-draharaha hampihatra sy hampiasa programa fanaovana kara-panondro;
nametraka fepetra takiana amin'ny karatra famantarana anarana; hametraka ny karamidin'ny karatra famantarana anarana; mba hitaky ny departemanta hametraka rafitra fandraisana lisansa vonjimaika;
hametraka ny fangatahana fangatahana karatra fampidirana fisoratana anarana;
hanorina rehefa afaka mandà ny fangatahana ny karatra famantarana anarana misoratra anarana ny sampana; mametraka andraikitra sasany ho an'ny tompon'andraikitra; hanorina rehefa afaka esorina ny karatra fampidirana fisoratana anarana;
hametraka sokajy lisansa orinasa rongony isan-karazany;
hametraka miaro ny fahazoan-dàlana amin'ny fihenan-tsakafo; ny fangatahana fampahalalana sasany dia ampidirina ao amin'ny rindranasa mombamomba ny fahazoan-dàlana cannabis;
hanorina rehefa afaka mandà fangatahana ny fahazoan-dàlana ara-dalàna cannabis Laws Kentucky Medical ny departemanta;
mandrara ny dokotera iray tsy ho mpikambana ao amin'ny biraom-panjakana na manamboninahitra lehibe amin'ny orinasa cannabis; mandrara ny fizarana tompom-pahefana sasany amin'ny orinasa cannabis; ary
hametraka fitsipika ho an'ny varotra eo an-toerana.
FIVAVAHANA MISY: Ahoana ny fomba hanokafana dispensary Cannabis
Te hanokatra raharaham-barotra cannabis
Kentucky May ara-dalàna ny fitsaboana marijuana
Lalànan'ny mpitsabo cannabis any Kentucky - Ny herinandro lasa teo, ny komitin'ny tranom-panjakana ao Kentucky dia nanolotra volavolan-dalàna iray hanamarinana ny marijuana ara-pahasalamana, The bill, HB 136, dia manana fanohanana lehibe eo amin'ny fanjakana, ary manantena fa lasa lalàna. Vao haingana izay no nivoaka ny komity tao amin'ny House House 116 pejy,. Mila ekipa tsara ianao handresena lisansa rongony ao amin'ny Bluegrass State ary manomboha amin'ny drafitra fandraharahana rongony ankehitriny.
HB 136 dia namorona paikady fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana "Orinasa cannabis" sampandraharaha, fitandremana miaraka amin'ireo fironana ankehitriny ankehitriny manondro ny "cannabis" fa tsy "marijuana." Ny volavolan-dalàna dia mamela ny ankamaroan'ny antsipirihan'ny fahazoan-dàlana amin'ny fitsipika momba ny fitantanana amin'ny ho avy, angamba mitovy amin'ny 200 pejy pejy momba ny lalàna "vonjy maika" ho an'ny fahazoan-doza cannabis any Illinois.
Ny drafitra fahazoan-dàlana feno dia mamorona lisansa dimy amin'ny alàlan'ny lisansa cannabis amin'ny alàlan'ny lalàna vaovao Kentucky Medical Cannabis. Eto ambany dia mandinika ny sasany amin'ireo fepetra takiana ho an'ny lisansa lozisialy samihafa.
LICENSE CULTIVATOR KENTUCKY MARIJUANA
Ny volavolan-dalàna dia mamaritra ny "mpamboly" toy izao:
Ny "Cultivator" dia entity manana fahazoan-dàlana ambanin'ity toko ity izay mamboly, mioty, ary manolotra akora zavamaniry ho an'ny mpamboly, dispensary, processeur, mpamokatra, na trano fanarahan-dalàna;
Ny kolontsaina dia voafetra amin'ny fambolena ny akora. Ny fizarana 21 dia mametra ny asany toy izao manaraka izao:
Ny fahazoana, ny fananana, ny fambolena, ny fambolena, ny fiakarana, ny fijinjana, ny fanamasinana, na ny fitehirizana ny voan-tsinapy, ny voa, ny zavamaniry, na ny akora maniry.
Manatitra, mitatitra, mifindra, mamatsy, mividy, na mivarotra akora na zava-maniry mifandraika amin'n ireo orinasa cannabis voarara ao amin'ity fanjakana ity; na
Varotra varimbazaha na voan-tsakafa amin'ny sampana mitovitovy amin'izany izay nomena alalana hamboly fongana eto amin'ity fanjakana ity na any amin'ny sehatra hafa rehetra.
Ny kulturiste irery no sampam-pizarana sandoka izay misy “tsipika hafa”, misy fiantraikany amin'ny vidin'ny fahazoan-dàlana. Izany dia toa ny fahazoan-dàlana cannabis hafa any amin'ny fanjakana hafa. Misy mpamboly Tier I, Tier II, Tier II, ary Tier IV, miorina amin'ny haben'ny fambolena fambolena azy ireo:
Tier I hamboly- 2,500 metatra toradroa na latsaka kely kokoa;
Tier - 10,000 metatra toradroa na vitsy;
Tier III- 25,000 tongotra metatra na vitsy;
Tier IV- 50,000 tongotra metatra na vitsy kokoa.
Tsy maintsy eken ny fanjakana farafaharatsiny Ny fahazoan-dàlana 15 fambolena ao anatin'ny herintaona aorian'ny fampiharana.
Farany, ireo mpamboly (ary koa ny mpamokatra sy ny mpamokatra) dia manaiky matotra hetra. Ny fizarana faha-33 dia mametraka hetra alaina amin'ny 12% amin'ny vola miditra an'ny mpamboly.
CANNABIS KENTUCKY FIVORIANA MITOMPOANA
Ny volavolan-dalàna dia mamaritra ny "dispensary" toy izao:
Ny "dispensaire" dia entina manana fahazoan-dàlana manana fahazoan-dàlana ambanin'ity toko ity izay mahazo, manana, manatitra, mamindra, manatitra, mivarotra, mamatsy na manome fanafody rongony 16 ho an'ireo tompon-karatra;
Ny fahazoan-dàlana amin'ny dispensaries dia somary mahasarika kokoa noho ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly. Ny volavolan-dalàna dia mitaky ny hanambaran'ireo dispensaries miaraka amin'ireo mpivaro-panafody. Ny fizarana 22 dia manome:
Ny fotoam-pivoriana iray dia takiana amin'ny fametrahana sy hihazonana ny fifanarahana fiaraha-miasa 10, araka ny voalaza ao amin'ny Fizarana 10 amin'ity lalàna ity, miaraka amin'ny fivarotam-panafody nomen'ny Kentucky Board of Pharmacy mba hirotsaka amin'ny fifanarahana fiaraha-miasa miaraka amin'ny dispensary iray.
Tsy maintsy eken ny fanjakana farafaharatsiny Fanolorana fahazoan-dàlana 25 ao anatin'ny herintaona volavolan-dalàna manomboka. Ny volavolan-dalàna dia mitaky ihany koa ny foto-kevitra farafaharatsiny ekena ho an'ny tsirairay amin'ireo "distrika fampandrosoana" natsangana. Raha ny tokony ho izy dia voatery miparitaka ara-jeografika hanakona ny fanjakana izy ireo.
Soa ihany fa tsy eo ambanin'ny hetra lehibe amin'ny mpamboly sy ny mpamokatra ary ny mpamokatra ny dispensaries.
KISIKO KENTUCKY CANNABIS LICENSE PROCESSOR
Ny volavolan-dalàna dia mamaritra ny "processor" toy izao:
"Processor" dia entina manana fahazoan-dàlana manana lisansa eto amin'ity toko ity izay mahazo akora zavamaniry avy amin'ny mpamboly mba hanomanana, handokoana, hanodinkodinana, hanambadiana, hanamboarana, na hanovana ny fitaovan'ny zava-maniry, sy ireo vokatra fonosana misy na azo avy amin'ireo akora fototra. amidy amin'ny dispensary manana fahazoan-dàlana. ”
Ireo mpamolavola dia mahazo manao zavatra sasany voalaza ao amin'ny Fizarana 23:
(a) Fahazoana na fividianana akora mamboly avy amin'ny mpamboly, mpamoaka vokatra, na mpamokatra amin'ity fanjakana ity;
b) Famokarana, fanodinana, fanomanana, famokarana, fanodinana, fifangaroana, fanomanana, na famonosana ny cannabis fanafody;
(c) Famindrana, fitaterana, famatsiana, na famarotana rongony fanafody sy ny fitaovana mifandraika amin'ny orinasa cannabis hafa amin'ity fanjakana ity; na
(d) Mivarotra voa na zana-ketsa amin'ny sampana mitovy amin'ny fahazoan-dàlana mitovy amin'ny fahazoan-dàlana hikolokolo otrikaretina amin'ity fanjakana ity na any amin'ny sehatra hafa.
Ny volavolan-dalàna dia mitaky fahazoan-dàlana dimy (5) farafahakeliny ao anatin'ny làlan-taona iray. Ny mpamokatra dia iharan'ny hetra alaina amin'ny 12% mitovy habe amin'ny mpamboly.
KENTUCKY CANNABIS LICENSE PRODUCER
Ny volavolan-dalàna dia mamorona fahazoan-dàlana ho an'ny "mpamokatra", izay mpamboly sy olontsotra mitambatra. Voafaritra manokana, ao amin'ny fizarana 1 toy ny:
Ny "mpamokatra" dia midika orinasa iray nahazo alalana tamin'ity toko ity izay avela hiasa 17 ary handray anjara amin'ny hetsika avelan'ny mpamboly sy ny mpikirakira 18.
Araka ny fizarana 24, navela hanao:
(a) Fahazoana, fananana, fambolena, fambolena, fiakarana, fanangonam-bolo, fanalefahana, na fitahiry voan-tsinapy, voa, zavamaniry, na fitaovam-pambolena maitso;
b) Fanaterana, fitaterana, famindrana, famatsiana, na fivarotana akora zavamaniry, vokatra rongony rongony, na kojakoja mifandraika amin'ireo orinasa rongony manana fahazoan-dàlana hafa eto amin'ity fanjakana ity;
c) Fivarotana voa na zana-kazo marihitra amin'ireo orinasa mitovy amin'izany izay mahazo alalana hamboly rongony amin'ity fanjakana ity na amin'ny faritra hafa;
(d) Fividianana na fividianana akora fambolena avy amin'ny mpamboly ao amin'ity fanjakana ity; na
e) Fananana, fanodinana, fanomanana, famokarana, fanodinkodinana, fampifangaroana, fanomanana, na famonosana rongony fanafody;
Tao anatin'ny herintaona iray amin'ny volavolan-dalàna dia tsy maintsy mamoaka fahazoan-dàlana telo (3) farafahakeliny ny fanjakana. Ireo mpamokatra dia iharan'ny hetra ihany koa.
KICUCKY MARIJUANA SAFETY FAHASALAMANA FAHASALAMANA
Fitaovana fanarahan-dalàna momba ny fiarovana amin'ny alàlan'ny otrikaretina nomena alalana ao amin'ny lalàna dia manatanteraka asa iray amin'ny roa
a) Fitsapana ny valan-drongony fanafody vokarina amin'ny ozinina cannabis nomena ity lisitra ity; na
(b) Mpampiasa karatra fiofanana sy mpiasa mpandraharaha cannabis;
Ireto hetsika manaraka ireto dia avela atao eo ambanin'ny fizarana 25:
(1) Fahazoana na fananana rongony azo avy amin'ny mpahazo karatra na orinasa 26 cannabis ao amin'ity fanjakana ity;
(2) famerenana ny valan-drongony amin'ny fanafody karatra na orinasa cannabis amin'ity fanjakana ity;
(3) Ny fitaterana otrikaina fanafody izay novokarin'ny orinasa cannabis tamin'ity fanjakana ity;
(4) Ny famokarana na famarotana ireo fitaovana fanabeazana efa nekena mifandray amin'ny fampiasana rongony fanafody;
(5) Ny famokarana, fivarotana, na fitaterana fitaovana na fitaovana hafa ankoatry ny rongony ara-panafody, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fitaovan'ny laboratoara sy ny fonosana fonosana izay ampiasain'ny orinasa rongony sy ny tompon-karatra, ho an'ireo manana karatra na orinasa rongony nahazo alalana tamin'ity toko ity;
(6) Fitsapana ny rongony rongony vokarina ao amin'ity fanjakana ity, ao anatin'izany ny fanandramana ny atin'ny cannabinoid, ny fanafody famonoana bibikely, ny bobongolo, ny fandotoana, ny vitamina E acetate, ary ireo zavatra hafa voarara voarara;
(7) Tompona karatra fiofanana sy mpandraharaha rongony. Ny fiofanana dia mety misy nefa tsy tokony hoferana ho:
a) Ny fambolena azo antoka sy mahomby, ny fijinjana, ny fonosana, ny marika ary ny fitsinjarana ny valan-jaza ara-pahasalamana;
(b) Ny fomba fiarovana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny asa; ary
c) Ny fikarohana fikarohana siantifika sy ara-pitsaboana mifandraika amin'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fanafody cannabis;
(8) Fahazoana onitra amin'ny hetsika avela atao eo ambanin'ity fizarana ity; ary
(9) Fandraisana anjara amin'ny asa fandraharahana mifototra tsy misy otrikaretina izay tsy voarara na tsy voafetran'ny lalàna ao amin'ny fanjakana.
Tsy toa ny fahazoan-dàlana hafa, ny fanjakana dia tsy takiana amin'ny famoahana fahazoan-dàlana maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana hiarovana ny cannabis.
Misy fampisongadinana vitsivitsy hafa ao amin'ilay volavolan-dalàna izay hisy fiantraikany lehibe amin'ny tsenan'ny cannabis ara-pitsaboana any Kentucky:
Ny mpamokatra iray manana fahazoan-dàlana dia afaka miasa afa-tsy fambolena iray (1) ary toeram-pamolavolana iray (1), na dia mety amin'ny toerana samihafa aza izy ireo;
Ny saram-panavaozana ny fahazoan-dàlana dia miankina amin'ny salanisan'ny fidiram-bola lehibe:
Raha latsaky ny $ 2,000,000 1 500 ny fahazoan-dàlana dia, XNUMX% amin'ny sanda gross dia $ XNUMX;
Raha eo anelanelan'ny $ 2,000,000 sy $ 8,000,000 1.5 ny fahazoan-bola mivoaka, dia 2,000% ny vola noraisiny dia $ XNUMX XNUMX;
Raha mihoatra ny 8,000,000 2 4,000 dolara ny saran'ny vola mivoaka dia XNUMX% XNUMX $ ny sara.
Raha latsaky ny $ 2,000,000 raha nahazo vola gratuit tamin'ny taon-dasa dia $ 500 sy 1% ny fidiram-bola gross;
Ny departemanta dia afaka mandà ny fahazoan-dàlana ho an'ny misy antony "Amin'ny fampiasana fahaiza-mandanjalanja tsara", ao anatin'izany:
Ny tompon'andraikitra iray dia voaheloka ho nanao heloka bevava sasany;
Tsy mifanaraka amin'ny fandraràna eo an-toerana ilay trano;
Tsy manome fahafaham-po ny fiarovana, ny fanaraha-maso na ny fitandremana ny firaketana an-tsoratra ny toerana.
JEREO NY HOAVIN'NY KGRUCKY MARIJUANA LEGALISATION
Azo antoka fa hiova ny volavolan-dalàna raha toa ka mandeha amin'ny alàlan'ny fizotry ny lalàna any Frankfort izany. Na izany aza, raha ny ankehitriny dia hita fa mitovy amin'ny fitondrana ara-pitsaboana any amin'ny fanjakana hafa ny HB 136. Tena hamely ny arabe ny fikosoham-bary raha toa ka mamoaka fitsipika momba ny fizotran'ny fangatahana feno ny fanjakana. Kentucky dia niandry fatratra ny hiaraka amin'ireo fanjakana maro hafa izay tamin'ny farany dia nandray ny tombontsoa ara-pitsaboana ny cannabis.
Ny lalàna cannabis Medical Kentucky
Ho an'ny tanjon'ny fizarana 1 ka hatramin'ny 30 amin'ity lalàna ity, raha tsy hoe mitaky amin'ny fomba hafa ny toe-javatra:
6 (1) "Fifandraisan'ny mpampiasa sy ny marary Bona fide" dia midika hoe fitsaboana na consulting
Fifandraisana 7, mandritra ny fizotran'ny mpanao:
8 (a) Nahavita fanadinana sy fanombanana momba ny
Tantaran'ny fitsaboana 9 sy ny toe-pahasalamana ankehitriny;
10 (b) Niresaka tamin'ny marary momba ny fitsaboana mety
11 fananana palliative ny fanafody cannabis;
12) c) Nanoro hevitra ny marary ny mety hiseho sy ny fiantraikany miaraka
13 ny fampiasana fanafody rongony misy ny fifandraisana azo atao eo Kentucky Medical Legal cannabis Legalization
14 rongony fanafody sy fanafody hafa ananan'ny marary
15 maka fotoana tamin'izany; ary
(D) Nametraka fiandrasana fa hanome ny fikarakarana izy ary
17 ny fitsaboana amin'ny marary;
18 (2) "Orinasa rongony" dia mpamboly, dispensary, mpanodina, mpamokatra, a
19 trano fanaraha-maso ny fiarovana nomena alalana ao ambanin'ity toko ity;
20 (3) "Mpiasa mpandraharaha rongony" dia manamboninahitra lehibe, mpikambana ao amin'ny birao, mpiasa,
Mpirotsaka an-tsitrapo 21, na mpandraharaha amin'ny orinasa mpamono rongony;
22 (4) "Mpanaraka karatra" dia midika hoe:
23 (a) Ny marary manana fisoratana anarana, mpiambina voatondro voatokana, na mpikarakara mitsidika
Ny marary 24 izay nanao fangatahana, nahazo ary nanana fisoratana anarana
Karatra famantarana 25 navoakan'ny departemanta arak'izay notakian'ny toko ity; na
(B) Ny marary mitsidika izay nahazo sy nahazoana fisoratana anarana
27 karatra famantarana, na ny mitovy aminy, izay navoaka araka ny lalàn'i
COPY TSY MAFOTRA 20 RS HB 136 / GA Pejy 2 amin'ny 118 HB013610.100 - 366 - Fanomezana ara-dalàna ny rongony medikalin'i Kentucky
1 fanjakana iray hafa, distrika, faritany, fananana saranga, fananan'ny tsy fananana
2 Etazonia, na firenena eken'ny Etazonia mamela ny
Olona 3 hampiasa rongony ho an'ny fanafody fitsaboana any amin'ny fanapahana
5 (5) Ny "Cultivator" dia midika orinasa iray nahazo alalana tamin'ity toko ity izay mamboly, mioty,
6 ary manolotra fitaovam-pambolena maitso ho an'ny mpamboly hafa, ny dispensariera, ny mpamoaka,
Mpamokatra, na trano fanarahana fiarovana;
8 (6) "Mpiasa mpamboly" dia manamboninahitra lehibe, mpikambana ao amin'ny birao, mpiasa,
Mpirotsaka an-tsitrapo, na mpandraharaha amin'ny fambolena;
10 (7) Ny "departemanta" dia midika hoe departemanta ho an'ny fahasalamam-bahoaka izay napetraka ao amin'ny KRS
12 (8) "Mpikarakara voatendry" dia olona iray izay efa nisoratra anarana tamin'io
Departemanta 13 araka ny takiana amin'ity toko ity;
14 (9) Ny «dispensaire» dia midika orinasa iray nahazo alalana tamin'ity toko ity izay mahazo,
15 dia manana, mandefa, mamindra, mifindra, mivarotra, manome sakafo, na manala fanafody
16 cannabis ho an'ny tompon'andraikitra;
17 (10) "Agence des dispensaire" dia manamboninahitra lehibe, mpikambana ao amin'ny birao, mpiasa,
Mpirotsaka an-tsitrapo 18, na mpandraharaha amin'ny fotoam-pananana iray;
19 (11) "Fandikana heloka bevava tsy mendrika" dia midika hoe:
20 (a) Fanamelohana mahatsiravina izay manasokajy ilay olona ho meloka mahery setra
21 KRS 439.3401; na
(B) fanitsakitsahana ny lalàna na fananana fifehezana federaly izay nosokajiana
23 amin'ny maha-heloka bevava azy izay nanamelohana ilay olona, ​​afa-tsy:
24 1. Faharatsiana izay anaovana ny sazy, anisan'izany ny fe-potoana fizahana,
25 famerenana am-ponja, na famotsorana azy ireo dia vita dimy (5) na mihoatra
26 taona talohan'izay; na 27 2. Faharatsiana izay misy ny fitondran-tena izay fizarana 1 ka hatramin'ny 30 amin'izany
Kentucky Medical Law Cannabis Laws - ankoatry ny pejy manaraka
1 Ny asa dia mety ho nanakana ny fandresen-dahatra, fa ny fihetsika koa
2 dia niseho alohan'ny fampiharana ny Fizarana 1 hatramin'ny 30 amin'ity lalàna ity na
3 nenjehin'ny manam-pahefana ankoatra ny Commonwealth of
5 (12) "Fitaovana mihidy sy mihidy" dia midika toerana malalaka an-trano toy ny efitrano,
6 trano maitso, trano, na faritra anatiny afovoan'ny anatiny izay hitazomana sy
7 amboarin'ny mpamboly na mpamokatra ary amboara sy fiarovana hafa
Fitaovana 8 ahafahan'ny fidirana amin'ny alalàn'ny mpamboly na mpamokatra, as
9 takian'ny departemanta;
10 (13) Ny "fahazoana goavambe" dia midika hoe ny vola rehetra voaray amin'ny vola, trosa, fananana na hafa
Vola 11 amin'ny endriny rehetra, amin'ny orinasa rongony;
12 (14) Ny "faritry ny fitomboana" dia midika hoe mitovy amin'ny toerana mihidy sy mihidy;
13 (15) "Marijuana" dia mitovy amin'ny faritana ao amin'ny KRS 218A.010;
14 (16) Ny "rongony rongony" dia midika marijuana araka ny voafaritra ao amin'ny KRS 218A.010 rehefa
15 fambolena, fijinjana, fanolorana, famokarana, fitaterana, famerana, fizarana,
16 namidy, fananana, na nampiasaina araka ny fizarana 1 ka hatramin'ny 30 amin'ity lalàna ity. Ny fepetra
17 "rongony rongony" dia misy vokatra rongony rongony sy akora fototra 18;
19 (17) Ny "kojakoja rongony rongony" dia midika hoe fitaovana, vokatra na fitaovana misy
20 ny karazany rehetra ampiasaina, natao hampiasaina, na natao hampiasaina amin'ny fanomanana,
21 mitahiry, mampiasa, na mandany ny zava-mahadomelina amin'ny zava-mahadomelina mifanaraka amin'ny Fizarana 1
22 ka hatramin'ny 30 amin'ity lalàna ity;
23 (18) _ "vokatra rongony rongony" dia midika hoe fitambarana, fanamboarana, sira,
24 derivative, fangaroharoana na fanomanana amin'ny ampahany amin'ny zava-maniry ao anaty zavamaniry Cannabis sp., Ny voany
25 na ny volony; na tambonon-javatra, fifangaroana, na fiomanana izay misy
26 ny habetsaky ireo akora ireo rehefa mamboly, mijinja, mitsitsy, mamokatra,
27 no nitondra, nihemotra, nizara, nivarotra, nanana, na nampiasaina araka ny
COPY TSY MAFOTRA 20 RS HB 136 / GA Pejy 4 amin'ny 118 HB013610.100 - Fanomezana ara-dalàna ny rongony medikalin'i Kentucky
1 Fizarana 1 ka hatramin'ny 30 amin'ity lalàna ity;
2 (19) "Minora" dia olona latsaky ny valo ambin'ny folo (18) taona;
3 (20) "Farmasista" dia midika mitovy amin'ny KRS 315.010;
4 (21) Ny "mpampiofana" dia midika ho mpitsabo manana alalana hitarika voafehy
Akora 5 eo ambanin'ny KRS 320.240, na fanao an-tsoratra mandrindra izay voasoratra
6 nahazo alàlana hanoratra zavatra voafehy eo ambany KRS 314.042, izay
Nomena alalana avy amin'ny birao fitsidihan'ny fanjakana hanome ny fanamarinana an-tsoratra araka ny
8 Fizarana 5 amin'ity lalàna ity; 9 (22) Ny "processeur" dia midika orinasa iray nahazo alalana tamin'ity toko ity izay mahazo zavamaniry manta
Akora 10 avy amin'ny mpamboly mba hiomanana, hanodinana, hanodinana, hifangaro.
11 ny fanamboarana, na raha tsy izany dia manova ny akora maniry, sy ny vokatra fonosana
12 misy na avy amina akora mamboly mamboly amidy manana fahazoan-dàlana
Dispensary 13; 14 (23) "Agent processeur" dia manamboninahitra lehibe, mpikambana ao amin'ny birao, mpiasa,
Mpirotsaka an-tsitrapo 15, na mpandraharaha mpanova;
16 (24) Ny "mpamokatra" dia midika orinasa iray nahazo alalana tamin'ity toko ity izay avela
17 miasa sy mampiditra ireo hetsika avelan'ny mpamboly sy
Processeur 18; 19 (25) "Mpiasa mpamokatra" dia midika hoe manamboninahitra lehibe, mpikambana ao amin'ny birao, mpiasa, mpilatsaka an-tsitrapo,
20 na mpandraharaha mpamokatra;
21 (26) "Marary mendrika" dia olona iray izay nahazo fanamarinana an-tsoratra avy amin'ny
22 dokotera iray manana fifandraisana bona fide-manam-paharetana 23;
24 (27) Ny "fepetra ara-pahasalamana mahafeno fepetra" dia midika aretina na aretina
25 dia miseho ao amin'ny lisitry ny fepetra misy fitsaboana izay mety ho an'ny mpitsabo iray
26 manome marary iray fanamarinana an-tsoratra nankatoavin'ny departemanta
Araka ny fizarana 27 sy 3 amin'ity lalàna ity ary mifanaraka amin'ny fitantanana
COPY TSY MAFOTRA 20 RS HB 136 / GA Page 5 of 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 fitsipi-pitondran-tena nidina teo amboniny;
2 (28) "Zavamaniry velona" dia midika hoe ny faritra rakotra trichome an'ny zavamaniry vavy
3 cannabis sp. na ny fangaro amin'ny ravina voasarona, ny fakany, ny voa ary ny vonin'ny
4 rongony sp. fototra; 5 (29) "Kara-panondro rezistra" dia midika hoe antontan-taratasy navoakan'ny departemanta izay
6 mamantatra olona iray ho marary mahay, mitsidika marary mahay, na voatondro
Mpikarakara 7; 8 (30) Ny "marary mahafeno fepetra voasoratra anarana" dia midika hoe marary manam-pahaizana izay nangataka,
9 nahazo, ary manana karatra famantarana famantarana fisoratana anarana na vetivety
Fangatahana fahazoan-dàlana 10 navoakan'ny departemanta;
11 (31) "Toeram-pifanarahana amin'ny fiarovana" dia midika orinasa iray nahazo alalana tamin'ity toko ity izay
Ny 12 dia manome farafaharatsiny iray (1) amin'ireto serivisy manaraka ireto:
13 (a) Fitsapana ny fanafody cannabis vokarina amin'ny orinasan-tsizara nomena alalana
14 ity toko ity; na 15 (b) Mpampiasa karatra fiofanana sy mpandraharaha cannabis;
16 (32) "Agent agents de l'Espaniola", dia tompon'andraikitra voalohany, mpikambana ao amin'ny birao,
Mpiasa 17, mpirotsaka an-tsitrapo, na mpiasan'ny trano fanarahana fiarovana;
18 (33) Ny "zana-ketsa" dia zavamaniry rongony izay tsy misy voninkazo ary lava noho ny valo
19 (8) santimetatra; 20 (34) Ny "fifohana sigara" dia midika fofohana setroka vokarina avy amin'ny fandoroana manta
Zavamaniry 21 rehefa nirehitra tamin'ny lelafo; 22 (35) "Birao fahazoan-dàlana ho an'ny fanjakana" dia midika hoe:
23 a) Ny Birao Kentucky momba ny fahazoan-dàlana amin'ny fitsaboana; ary 24 (b) Ny Birao Kentucky;
25 (36) "Fampiasana rongony fanafody" na "fampiasana rongony rongony" dia misy ny
26 fividianana, fitantanana, fananana, famindrana, fitaterana na fanjifana
27 fanafody cannabis fanafody na fanafody cannabis fanafody avy amin'ny mpiasan'ny carteard ao
COPY TSY MAFOTRA 20 RS HB 136 / GA Page 6 of 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
1 mifanaraka amin'ny Fizarana 1 ka hatramin'ny 30 amin'ity lalàna ity. Ny teny hoe "fampiasana fanafody
Rongony 2 ”sy“ fampiasana rongony rongony ”dia tsy misy:
3 (a) Fambolena rongony an-tsitrapo; na 4 (b) Ny fampiasana na fanjifana rongony amin'ny alàlan'ny fifohana sigara;
5 (37) "Ny marary manam-pahaizana mitsidika" dia olona iray izay nisoratra anarana tamin'ny alalàn'ny
6 ny departemanta araka ny takiana amin'ity fizarana ity na izay manana fisoratana anarana
Karatra famantarana famantarana, na antontan-taratasy mitovitovy, izay navoaka mifanaraka amin'ny
Lalàna 8 amin'ny fanjakana iray, distrika, faritany, fananana saranga, fananan'ny tsy fananana
Etazonia na firenena na eken'ny Etazonia izay mamela an'io olona io
10 hampiasa otrikaretina fanafody ao amin'ny fanjakan'ny famoahana; ary
11 (38) Ny "fanamarinana an-tsoratra" dia midika ho antontan-taratasy misy daty sy nosoniavin'ny mpitsabo,
12 fa: 13 a) Milaza fa amin'ny hevitry ny mpitsabo dia mety horaisin'ilay marary
14 fitsaboana na palliative tombony azo avy amin'ny fampiasana fanafody cannabis;
(B) Manondro ny fepetra ara-pitsaboana sy fepetra momba ny
Mpampianatra 16 no mino fa mety mahazo fitsaboana na palliative ny marary
17 mahasoa; sy 18 (c) Manamafy fa ny mpitsabo dia manana bona factant-p izay
Fifandraisana 19 amin'ny marary